मूल्यवृद्धि ४.८ प्रतिशत! « Deshko News
मूल्यवृद्धि ४.८ प्रतिशत!
नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक महिनामा मूल्यवृद्धि ४.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक शुक्रबार सार्वजनिक ग¥यो। बढ्दो महँगीले उपभोक्ताको खल्ती रित्तिएका बेला केन्द्रीय बैंकले ४.८ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि भएको विश्वास गर्ने आधार भने उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक महिनासम्ममा औसतमा मूल्यवृद्धि सात प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष औसतमा यो महिनासम्ममा मूल्यवृद्धि ८.१ प्रतिशत थियो। राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि घट्दै गएको हुँदा उपभोक्ताले राहत पाएको भनेको छ। तर, उपभोक्ता मूल्यवृद्धि घटेको तर्कसँग सहमत छैनन्।
सामाजिक सन्जालमा आएका प्रतिक्रियामा पनि राष्ट्र बैंकले बजारको भन्दा कम मूल्यवृद्धिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार उपभोक्ताले गत वर्ष कात्तिक महिनामा औसतमा कुनै वस्तु तथा सेवाको खरिदका लागि १ सय १० रुपैयाँ ९० पैसा खर्च गर्नुपर्ने थियो भने यो वर्ष बढेर १ सय १६ रुपैयाँ १० पैसा पुगेको छ।
यस्तै दालको मूल्य अघिल्लो वर्ष ४४.१ प्रतिशतले बढेको थियो भने यो वर्ष जम्मा २।३ प्रतिशतले घटेको थियो। अघिल्लो वर्षको कात्तिक महिनाको तुलनामा दालको यो वर्ष जति घट्नुपर्ने थियो त्यति घटेको देखिएको छैन।
गैरखाद्य समूहमा भने यातायात क्षेत्रमा मात्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य घटेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष यातायात क्षेत्रको मूल्य ४.८ प्रतिशतले बढेकोमा यो वर्ष ६।४ प्रतिशतले घटेको छ। तर, लत्ताकपडा र घरायसी सामानको मूल्यवृद्धि आपूर्ति असहज भएको अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले पनि अत्याधिक बढेको नै देखिन्छ।
अघिल्लो वर्ष १४।६ प्रतिशतले लत्ता कपडाको मूल्यवृद्धि बढेको थियो यो वर्ष यसको मूल्यवृद्धि ९।२ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै घरायसी सामानमा ११।४ प्रतिशतले मूल्य बढेकोमा यो पटक ८।९ प्रतिशतले बढेको छ।
क्षेत्रगत आधारले भने पहाडमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो पटक ६।२ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि बढेको छ यस्तै तराईमा ५।१ प्रतिशत, हिमालमा चार प्रतिशत र काठमाडौंमा तीन प्रतिशतले बढेको छ। आजको कारोबार दैनिकमा सामाचार छ ।